Ma waxaad ka heli adiga oo isticmaaleya isticmaale cable USB inuu u dhaqaaqo files u dhexeeya aad PC iyo telefoonka aad Android waqti lumis? Ha aad rabto in aad si fudud u soo sawiro iyo files u dhexeeya qalabka Android? Maqaalkani waxa uu muujinayaa siyaabaha qaar ka mid sahlan inuu u dhaqaaqo files u dhexeeya qalabka Android, iyo sidoo kale inta u dhaxaysa telefoonada Android oo your computer.
Habka 1. Bluetooth - Bedelka Photos Android oo Apps wirelessly u Free Habka 2. Google Drive - Ma Transfer File u Android Effortlessly Habka 3. AirDroid - Bedelka files Android inay PC ka badan WiFi Habka 4. Wondershare MobileGo for Android - wirelessly Bedelka files dhexeeya Android Devices
Habka 1. Bluetooth - Bedelka Photos Android oo Apps wirelessly u Free
Bluetooth, technology ah wireless, waxaa loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan files dhexeeya telefoonada Android ama kiniinno ka badan meel u dhow. In socda, waxaan ku qor baxay faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay u caawin aad fahamsan yahay. Ka dib markii in, waxaad raaci karaan tallaabooyinka ka sahlan tahay in la sameeyo kala iibsiga file Android la Bluetooth.
Waxaa loo baahan internet lahayn.
Quick oo fudud.
Simple in ay isticmaalaan ku dhawaad ​​dhammaan qalabka Android.
Files ka Android-to-Android oo Android-ka-dhaqaaq PC. Lacag la'aan.
Kaliya awoodaan in ay qaadaan files yar.
Waxaad ma dooran kartaa dhowr files si ay u gudbiyaan.
Raac talaabooyinka 3 si ay u gudbiyaan sawiro Android badan Bluetooth
Talaabada 1: Dooro sawir ama fayl aad rabto in lagu wareejiyo qalabka Android aad, dooro 'share via' ah icon, iyo dooran 'Bluetooth' (haddii aad Bluetooth aan la gagadin, ka dibna waxaa loo keenay in doonaa inaad u celin ku saabsan) .
Talaabada 2: qalab aad markaas ku bilaaban doono raadinaya Bluetooth qalabka u dhow. Fiiro gaar ah, waa muhiim in qalabka aqbaliddoodii leeyahay Bluetooth is reereebka tan inta badan si fudud loo gaadhi karo oo ag maraya galay 'goobaha' iyo helitaanka fursad u Bluetooth, kaas oo noqon doona sahlan looga heli karo ku dhowaad dhammaan qalabka Android soo jeestay. Marka waxa la helay, waxa ay doortaan.
Tallaabada 3: aad helaya qalab ka dibna aad ku wargelin doonaa in uu jiro file ah oo la soo diray, waxa uu. Ogolaanshaha file soo socda. Markaas Waxaad heli doontaa faylka cusub oo ku saabsan qalab aad.
Bluetooth sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa on hindisooyin badan Android in ay qaadaan barnaamijyadooda - tusaale ahaan Note Samsung Galaxy, waxaad ku diri kartaa barnaamijyadooda via Bluetooth doorataa calaamad codsiyada on menu ugu weyn, ka dibna laga faaiidaysanayo button menu dhinaca bidix ugu hooseysa qalabka, oo waxaad arki doontaa fursad ay 'app share'.
Habka 2. Google Drive - Ma Transfer File u Android Effortlessly
Google Drive waa WiFi Android app ah kala iibsiga file aad u faa'iido badan. Waxaa la abuuray by Google, oo uu idin wada siiyo awood ay ku geliyaan xogta shakhsiga ah, oo ay ku jiraan sawirrada, document files oo dheeraad ah oo ka qalab Android si aad u daruurtii. Markaas, aad leedahay fududahay in warbixinadan meel kastoo aad tagtidba oo waxaa iyaga la saaxiibadaa iyo qoysaska wadaagaan helaan.
Download Google Drive ka Gooogle Play >>
Waxaad heli kartaa faylasha aad ka qalab kasta oo ku dhex Google Drive Account.
Waxaad dooran kartaa files badan, la abuuro fayl, share la kooxo dad ah iyo helitaanka waxa oo dhan ka qalab kasta oo lagu taageerayo Google Drive.
Waxaa loo baahan Wi-Fi.
Bannaan ayaa la siiyaa lacag la'aan ah ku kooban yahay (15GB, laakiin waxa laga iibsan karaa).
Ma si toos ah dib ilaa macluumaadka oo dhan ku qalab aad, aad u leeyihiin in ay gacanta ay doortaan.
Raac 6 tallaabooyin ay ku samayn iibsiga file Android la Google Drive
Talaabada 1: fur app ee drive Google iyo geliyaan waraaqaha cusub doorataa icon Upload ah, bidix ee hoose ee shaashadda.
Talaabada 2: Dooro app iyada oo aad rabto in aad buuxiso tallaabada. Taasi waa, haddii aad rabto in aad geliyaan hees, waxaad dooran karaa 'Music Player' doorasho.
Talaabada 3: Sawirka aad uploaded muuqan doonaa.
Talaabada 4: Hadda, ku saabsan qalabka Android ama wax qalab kale oo aad leedahay la Google Drive lagu rakibay, haddii aad gasho koontadaada dhamman dokumentiga aad ku shuban doona oo ka muuqan.
Talaabada 5: Hadda waxaad dooran kartaa image aad asal ahaan uploaded on qalab kale, oo kala soo bixi waxay u gal oo qalab abid aad rabto in aad file ku saabsan.
Talaabada 6: Hadda waxaad haysataan faylka sida joogtada ah ee aad xisaabta Google Drive, oo waxay heli karaan iyo download it gal qalab kasta oo loo marayo app Google Drive.
Habka 3. AirDroid - Bedelka files Android inay PC ka badan WiFi
AirDroid waa aalad aad u caan ah, kuu maareeyaan iyo wareejiyo photos Android, ringtones, video iyo in ka badan ka browser web ah.
Wirelessly dib-up u maamuli lahayd oo dhan files Adroid ka PC.
U dir farriimaha, sawirrana laga qaadayay, xaalkaa xiriirada oo dhan iyada oo aan cable wax USB loo baahan yahay.
Bonus oo dheeraad ah waxaa ay awoodaan in ay wirelessly dabagal iyo kormeer telefoonka aad Android haddii aad lumiso, iyo haddii loo baahdo waxaad tirtiri kartaa dhammaan macluumaadka ku yaal.
U baahan xidhiidh ah isla Wi-Fi u dhexeeya aad PC iyo qalab Android.
Raac 6 tallaabooyin ay ku isticmaali AirDrop si ay u gudbiyaan files ka PC in Android, iyo qeybsanaan ku xigeenka
Talaabada 1: fur Google Play Store, baadhaan AirDroid iyo download it .
Talaabada 2: AirDroid Open ku saabsan qalabka telefoonada gacanta Android, oo waxay u iman doonaan la pop ah ilaa weydiinaya in aad awood waqtiga dhabta ah la wadaago oo aad PC, dooro awood. Waxaad markaa waa laga qaadi doonaa iyada oo si qaybihiisa, oo halkaas waa inaad la siin doonaa cinwaanka internetka ah si ay u galaan aad internet bar browser raadinta .
Tallaabada 3: Marka aad galay cinwaanka internetka ee aad kombuutarka, aad imaan doonta shaashada this. Si ay u helaan adeeggan, waxaa looga baahan doonaa inaad bixiso cinwaanka email ah oo sir ah. Haddii kale, waxaad saxiixi kartaa iyada oo ah Google Account, Facebook ama Twitter.
Tallaabada 4. Ka dib markii uu saxiixay shubo xisaabta kombuutarka, in aad hadda u baahan doonaan in ay sameeyaan isku mid ah ee aad taleefan.
Steo 5. doorasho An adeegga waa in awood 'Raadi Phone', tani waxay leedahay muujinta ah ee ay awoodaan in ay meel fog laga tirtiri aad taleefanada dhammaan xogta muhiimka ah ee hadii la xado, ama haddii uu kaa lumo telefoon aad u faa'iido badan. Waxaa sidoo kale la socon kartaa inta jeer habayn ayaa galay telefoonka, oo waxaad bedeli kartaa isku day ugu badan ee loo ogol yahay ka hor inta laftiisa qufulo qalabka. Ma aha in aad si ay u aqbalaan haddii aadan rabin in, laakiin waa qalab aad u waxtar leh oo caawin karaan wax badan oo ka mid ah argagax iyo stress agagaarka badiyay telefoonka, gaar ahaan haddii uu jiro macluumaad muhiim ah waxa ay ku.
Talaabada 6: Hambalyo! Dhamaan macluumaadka ka Android Phone ayaa hadda la wirelessly kala qaado si aad u computer. Waxaad hadda ku shaqeeyaan kartaa telefoonka dhex your computer. Waxaad in dadka soo diri kartaa fariimaha telefoonka ka your computer, ka dibna marka aad maqan yihiin oo aad weli raaci karo wada hadal la mid ah ku hadalka taleefanka gacanta. Mar kasta oo aad ka beddesho xiriir on your computer, waxa ay si toos ah u cusbooneysiin doontaa telefoonka marka ay ku xiran yihiin WiFi, sida hoos ku qoran:
Habka 4. Wondershare MobileGo for Android - wirelessly Bedelka Files dhexeeya Android Devices
Nasiib darro, barnaamijyadooda badan oo la heli karo si wirelessly wareejiyo photos iyo files u dhexeeya qalabka Android waa deganayn oo ay adag tahay in ay isticmaalaan. Waxa intaa dheer in, wareejinta files badan Bluetooth waa badan gaabis ah, oo u ogolaanaya oo kaliya kala iibsiga file yar. Sidaas darted, haddii aad rabto in aad wax badan oo sawiro qaado, ma ahan in wax tar leh. Nasiib wanaag, Wondershare MobileGo for Android kuu ogolaanayaa inaad wirelessly xirmaan ka badan hal phone Android ama kiniin in PC ah, si aad u fudud ugu guuraan karaan barnaamijyadooda iyo sawiro u dhexeeya qalabka Android. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay taageertaa dhammaan telefoonnada gacanta Android iyo kiniiniyada.
Simple, nadiif ah oo si sahlan loo isticmaali.
Oo gebi ahaanba dib qalab kasta oo aad ku xidhan Android si aad u computer iyada oo software ah.
Dhaqaaq xiriirada, videos, music, sawiro, barnaamijyadooda iyo waraaqaha u dhexeeya laba qalab kasta oo Android aad ku xiran software
Bedelka kuwaas files kor ku xusan laga bilaabo qalabka Android inay PC, iyo qeybsanaan.
Ma Free (Si kastaba ha ahaatee, waxaad isticmaali kartaa software this for free 15 maalmood ee ugu horreeya)
Software waxa kale oo la shaqeeya fiilooyinka USB, sidaas oo kale waxa aad maamuli kartaa qalabka Android aan isticmaalka WiFi haddii aad diyaar u ah inay ku xirmaan fiilooyinka USB yihiin.
Sida aan kor ku soo sheegnay, Wondershare MobileGo for Android sidoo kale awood u aad si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda, photos, music, video, sawiro iyo waraaqaha u dhexeeya qalabka Android iyo PC. Halkan, waxaan qaadan wareejinta barnaamijyadooda u dhexeeya qalabka Android sida tusaale. Si aad u ogaato oo ku saabsan kala iibsiga file Android la Wondershare MobileGo for Android, fadlan riix halkan.
Raac talaabooyinka in ay barnaamijyadooda ka mid Android wareejiyo kale
Talaabada 1: Download iyo Wondershare MobileGo for Android furan in aad kombuutarka. Dooro "Connect qalab cusub, si aad ah waxaa la siiyaa code QR ah.
Talaabada 2: fur scanner app QR ah ee aad taleefan ama kiniin ah, iyo lambarka sirta ah ee kombiyuutarka si aad u xiro qalabka aad.
Talaabada 3: In la ogolaado codsiga pop-up in ay oggolaadaan in xiriir aad kombuutarka.
Tallaabada 4. Marka xiran, dooro dhibic ka hoos menu wax kasta oo aad rabto in aad u dhoofiyaan si aad qalab kale.
Device Android kaabta & Soo Celinta 1 Click
3 Siyaabaha kaabta Android Sawiro
3 Siyaabaha Xiriirada Android kaabta
Dhammaan Aqoonta ku saabsan Lugood U u Android
Ka Nokia Demi Data in Android
Copy Lugood Music inay Android Phone
3 Siyaabaha la midowdo Xiriirada Samsung / Phones Android
Sidee si ay u gudbiyaan iyo Play YouTube FLV on Android
> Resource > Android > 4 Hababka loo sameeyo Transfer WiFi File Android Si fudud